Cilmi-baaris dhaqameedka vrs. LiDAR. Xaqiijinta, waqtiga iyo kharashyada. - Gofumed
Muuqaalka topografi dhaqameedka vrs. LiDAR Sax ahaanta, waqtiga iyo kharashyada.
Cudurka dabeecada ee caadiga ah. LiDAR Xaqiijinta, waqtiga iyo kharashyada.
Luulyo, 2015 Featured, Engineering, egeomates My, topografia
Ku shaqeynta LiDAR waxay noqon kartaa mid sax ah marka loo eego taayirrada caadiga ah? Haddii ay yareyso waqtiyada, boqolkiiba sidee? Waa imisa kharashka?
Wakhti ayaa isbedelay. Waxaan xasuustaa markii Felipe oo ah sahamiyihii ka shaqeeyay goobta, wuxuu la yimid buugga 25 oo leh bogagyo kala duwan si loo soo saaro khariidadda khadadka. Anigu ma aan noolayn waqti aan ku qoro waraaq laakiin waxaan ku xusuustaa inaan la qabsado AutoCAD adigoon isticmaalin Softdesk. Sidaas daraaddeed wuu interpolated la Excel in la ogaado sida fog meel aragti u dhexeeya labada sarreeya iyo dhibcood, kuwaas oo at lakab oo midabo iyo heerar kala duwan istaagay, ugu danbeyn ku biiray la polylines irlos galay gooladaha jeestay.
Iyadoo golaha shaqo waxay ahayd waali ah, ma aysan is barbar in ay qataan ahaa farshaxan, haddii aad ay doonayeen in ay xog ku filan si ay u sameeyaan Qaabaynta la aqbali karo marka altimetry ahayd aan caadi ahayn. Markaas SoftDesk, taariikhda AutoCAD Civil3D in fududeeyey golaha wasiirada iyo Felipe ahaa mid ka mid ah koorsooyinka aan waxbarashada si ay u isticmaalaan saldhig total, taas oo hoos u markii ugu yimid, mugga dhibcood iyo dabcan kordhay sax.
Heerka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isticmaala madaniga jebiya barbardhaaf cusub, iyada oo loo eegayo caqli la mid ah: Cadaadiska isbeddelka farsamooyinka taariikhiga ah ayaa had iyo jeer isku dayaya inuu yareeyo kharashka iyo dammaanad qaadka. Sidaa daraadeed waxaan ku falanqeyn doonnaa maqaalkani halkan laba shaandheyn oo aan halkaas ka maqalnay:
1 Hantidhowrka: Isku-dhafashada jimicsiga LiDAR wuxuu yaraynayaa waqtiyada iyo kharashyada.
Hypothesis 2: Si loo sameeyo fayadhowrka LiDAR waxay tusineysaa luminta saxda ah.
Kiiska tijaabada ah
Wargeyska POB nidaamiyey shaqo ah kaas oo shaqo lagu sameeyey ururinta xogta darsiga, iyadoo la adeegsanayo habka caadiga ah ee kuyaal 40. Dhanka kale, hawlgale labaad dhowr maalmood ka dib waxaa la sameeyay iyada oo la adeegsanayo farshaxanka qadiimka ah ee LiDAR ee kuyaal 246 ee isku dhowdhow. Inkasta oo qaybaha aan la mid ahayn fogaanshaha, qaybta u dhiganta ayaa la barbardhigay si isbarbardhig loogu sameeyo xaaladaha la midka ah.
Muuqaalka caadiga ah
Sahanka dusha sare ee aruurinta waxaa laga soo ururiyay qaybo kala duwan oo mitir kasta ah oo mitirka 30 ah, kaas oo u dhigma saldhigyada hadda jira. Dhibcaha udubdhexaadka ayaa lagu qaaday masaafo ka yar mitirka 4.
dhibcood shuqulka network geodesic ah, kaas oo la ansixiyey GPS geodetic weheliyaan faasaska, iyo ka dhibcahaas transverse kacay oo isticmaalaya isku mid ah saldhigyada tixraaca dalwaddii iyo juquraafi tilmaansado RTK. Waxa daruuri ahayd in ay qaataan dhibcood oo dheeraad ah oo ku saabsan isbedelka goobaha jiirada gaarka ah iyo sida loo hubiyo joogtaynta ee model ah digital.
Kala duwanaansho la'aanta ka dhaxaysa meelaha la yaqaan iyo iskudhafyada ay heleen GPS waxay ahaayeen kuwii lagu arkay miiska, xaqiijinayaan in qaadista caadiga ah waa mid sax ah.
Degenaanshaha ugu badan Shan duuduubka ugu yar
Saddexdan 3.48 cm. 2.41 cm.
Tani waxaa la sameeyey Cutubka Aasaaska oo u duulaya dhererka mitirka 965, oo leh cufnaanta dhibcaha 17.59 halkii mitir labajibbaaran. Waxay ka soo heleen 26 dhibcaha xakamaynta oo iyaga oo ka soo horjeeda 11 qodobbadii hore ee amar-bixinta ee la akhriyay GPS-ga jeodiga.
Iyadoo 37 ay tilmaamayaan isbedelka xogta LiDAR. Inkasta oo aan loo baahdo, sababtoo ah isku qaaday by UAV ku qalabeysan yahay qadanayo GPS iyo saldhigyada saldhig ay gacanta ku, ka heli mar kasta ugu yaraan 6 satalayt la arki karo iyo PDOP ka yar 3. Meelaha saldhigga ah ee saldhigga ahaa weligood kama badna 20.
Qeyb ka mid ah 65 dhibcaha xakamaynta dheeraad ah ayaa loo adeegsaday si loo xaqiijiyo saxsanaanta xogta LiDAR. Marka la eego qodobbada, waxaan helnay qodobada hoos ku xusan:
Degaanka magaalooyinka: 2.99 cm. (Dhibco 9)
Meelaha furan ama cawska hooseeya: 2.99 cm. (Dhibco 38)
In kaynta: 2.50 cm. (Dhibco 3)
Qoryaha ama cawska dheer: 2.99 cm. (Dhibco 6)
Sawirka wuxuu muujinayaa farqiga weyn ee cufnaanta u dhaxaysa dhibcooyinka la qaaday LiDAR iyo qaybaha iskutallaabta lagu calaamadiyay saddexagalaha cagaaran.
Natiijadu waxay ka badan tahay mid xiiso leh, taas oo ka soo horjeeda aragtida ah in baaritaanka LiDAR uusan gaarin qodobbada sahanka caadiga ah. Kuwa soo socda waa RMSE (Root macnaheedu waa khaladka wareega), taas oo ah xakamaynta qaladka u dhexeeya xogta la qabtay iyo meelaha xakamaynta tixraaca.
Muuqaalka caadiga ah Qaadidda Liidar
Kala duwanaanta waqtiga
Haddii kor ku xusan ay nagu yaabtay, arag waxa ka dhacay marka la eego hoos u dhigista qaabka isbarbar dhiga habka LiDAR iyo habka caadiga ah:
Xog ururinta xogta beeraha ee LiDAR waxay ahayd keliya 8%.
Shaqada Golaha Wasiirada waxay ahayd 27 keliya%.
Ku-soo-kabashada garoonka + duulista + Saacadaha golaha ee LiDAR ee ka dhanka ah xogta beesha + Golaha maktabadda caadiga ah, LiDAR waxay u baahan tahay 19 keliya.
Saameyntii, saacadaha 123 ee shaqada halkii kilomitir oo ah shaxanka caadiga ah ayaa la dhimay kaliya saacadaha 4 halkii kilomitirba.
Intaa waxaa dheer, haddii dhibcood wadar ahaan qabsaday inta u dhaxaysa waqtiga baabbi'ine geedi socodka qabashada iyo golaha wasiirada, habka caadiga ah qaybiyaa 13.75 dhibcood saacaddii helay, ka dhanka ah 7.7 million dhibcood LiDAR saacadiiba.
Qiimaha qalabkan casriga ah, oo leh kuwa dareemayaasha ah ee qaata dhibcaha dhibcaha, u maleyn in shaqadu tahay mid qaali ah. Laakiin marka la eego, hoos u dhaca waqtiga iyo kharashka ku-howlanaanta ee ka muuqda sawir-qaadashada caadiga ah, Kharashka kama dambaysta ah ee macmiilka 246 kilomitu waxay keentay LiDAR 71% ka hooseeya wadarta guud ee kharashka 40 oo leh shaxanka caadiga ah!
Waxay u muuqataa mid aan la aqbali karin, balse qiimaha halkii kilomitir oo xadidan oo leh LiDAR waxay ahayd 12 oo keliya marka la barbardhigo farshaxanka caadiga ah.
Miyuu dhererka guud ee LiDAR miyuu bedelayaa boogta dhaqameed ee dhaqameedku? Ma aha oo dhan, maxaa yeelay LiDAR shaqeeyo mar walba qaadataa qaar ka mid ah muuqaalka guud ee dhulka in isbaarooyinka, laakiin waxa ay soo gabagabeyn doono in la dhammaan faa'idoyinka qiimaha, tayada wax soo saarka iyo markii la LiDAR shaqeeya abuuraa natiijooyinka la dhowaad muuqaalka guud ee dhulka isla sax caadiga ah
Mar walba way jiri doonaan faa'iido iyo qasaaro; sax sare ee muuqaalka guud ee dhulka caadiga ah waa nostalgic, laakiin dhibaatooyin weydiisan ogolaansho inay galaan hanti gaar ah, khatarta of sites meesha aan joogto ahayn, farqiyada u baahan tahay inaad caws dhaadheer iyo caqabadaha ... waa waalan. Dabcan, cufnaanta ee cover kaynta kale oo keentaa khasaaraha ay dhacdo LiDAR, ma yihiin xuduudaha la mid ah xidhiidhka ka dhexeeya mashruuc aad beey u yartahay.
Gebogebadii, waxaan ku faraxsan nahay in la ogaado sida technology ayaa hormartay ilaa xad in mashaariicda waaweyn sida la soo jeediyay, waxaa lagama maarmaan ah in ay leeyihiin arinkii furan iyo helitaanka si ay u dooran for habab cusub oo hal abuur leh si ay u sameeyaan muuqaalka guud ee dhulka.
Post Previous«Previous Tuuray - software A free for falanqaynta dembiga
Post Next JOSM - CAD A xogta tafatirka ee OpenStreetMapNext »
8 wuxuu ka jawaabayaa “Vpopopo dhaqameedka vrs. LiDAR Sax ahaanta, waqtiga iyo kharashyada. ”
Dionisio gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
mahadsanid macluumaadka, waxaanu bixinnaa adeegga ikhtiyaarka ah, waxaad ku xariiri kartaa boostada caribbeansurveysupply@gmail.com
Julio Cubillan Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan ... saaxiibo .... ku saabsan isticmaalka drones in ay curiyaan baadhitaan ... .bar halis ah in shidma iyo / ama qalabka ku haboon u qaadaya aag aad u ballaaran (1000 ha. ama ka badan) oo la Dhirta cufan ama aad u cufan? halkaas oo marin aad u adag.
Article article !!
MASEZ MEDEZ isagu wuxuu leeyahay:
macluumaad aad u wanaagsan oo i siinaysaa aragtida wanaagsan ee technology this, sidoo kale ku soo gabagabeeyey in naqshado waa qalab weyn, laakiin waayo-aragnimada fulinteeda sahan caadiga ah iyadoo wadar ahaan saldhigyada qaadataa muhiimad weyn, u baahan in la sameeyo hagaajin badan oo khadadka saldhigyada cabbirada iyo iskuduubyada siinaya soo jeedinta loo baahan yahay ee mashruuc ah marxaladda fulinta halka ay xuduudaha ka yar tahay 0.05m qalad ah loo baahan yahay. salaan
JHOHAM isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiiqdii waan jeclaa caddaynta ee AS shaki HADDII ku adkaystay LOGRBA heli PRECISON isku.
waaar prada isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa muhiim ah in la ogaado xaqiiqada degaanka magaalooyinka ee aadka u degan, maaddaama dhammaan noocyada mashaariicda oo dhan aysan soo koobi karin go'aamada iyo waqtiyada.
Marco Portillo isagu wuxuu leeyahay:
Maqaal wanaagsan… !!! Waxaan u maleynayaa inay shaki kujirto inaan dhamaanteen meel heysano
ROLLING isagu wuxuu leeyahay:
WAXYAABAHA LAGU QAATO WAXYAABAHA SU'AASHA WAXA LA QAADAY
Tania isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiiqdii waan jeclaa maqaalkaagii. Waad ku mahadsan tahay.